Tag Archive for "Tihar" - शुभ साइतमै प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए भाइटीका
शुभ साइतमै प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए भाइटीका
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमै भाइटीका लगाएका छन् । उनले दुई जेठी बहिनी विष्णुमाया ढकाल र माहिली बहिनी कमलादेवी कोइरालाबाट भाइटीका लाएका हुन् । चिकित्सकहरूले आराम गर्नू भनेकाले स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्रीको भाइटीका बालुवाटारमै तय गरिएका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीकी जेठी बहिनी विष्णुमाया चितवनमा र माहिली बहिनी कमलाद... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडद्वारा सञ्चालित चन्द्रागिरि केबलकार तिहार विदाको विदामा समेत बन्द नहुने भएको छ । दर्शनार्थीहरू एवम् आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर विदाको दिनमा सेवा दिने निर्णय चन्द्रागिरि हिल्स व्यवस्थापनले लिएको छ । ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्व बोकेको चन्द्रागिरि डाँडामा यस कम्पनीले भालेश्वर महादेव मन्दिर, सत्तल, भ्यू टावर, चिल्ड्रेन पार्क... थप पढ्नुहोस्
कसरी मनाउदै छन् कांग्रेसका नेताहरुले तिहार ?
काठमाडौं । नेपाली हिन्दुहरुको महान पर्व दशैं पछिको दोस्रो ठूलो चाड तिहार धुमधामका साथ मनाइँदैछ । गाउँ सहर झिलिमिली बनेका छन् । उज्यालो पर्वका रूपमा लिइने तिहारलाई दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको पर्वका रूपमा लिइने भएकाले दाजुभाइहरू दिदीबहिनीकोमा आउने वा दिदीबहिनी दाजुभाइकहाँ गएर भाइटीका लगाउने चलन छ । दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएर सु–स्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छन् भने दाजुभाइले आफ्नो गच्छेअनुसा... थप पढ्नुहोस्
तिहार र यससँगैका अन्य पर्वहरू : सबैमा मंगलमय शुभकामना !
सम्पादकीय तिहारलाई यमपञ्चक अवधिको एउटा हिन्दूचाडको रुपमा मात्र हेर्नु कमजोर वैचारिक स्तरमात्र होइन, नेपाली संस्कृतिको वैभवप्रति उपेक्षा र तिरस्कार गर्न खोजेको प्रतित हन्छ । यो यस्तो चाड हो, जसले मानिसलाई मात्र होइन , काग, कुकुर, गाई–गोरूको पनि पूजा गराउँछ । हिन्दु धर्म र संस्कृति चाडपर्वका सन्दर्भमा विरोधाभासपूर्ण छ । दशैँले पशु–पंक्षीको बली खोज्छ तर तिहारले तिनै पशुपंक्षीलाई फूलमाला र पूजासहित ... थप पढ्नुहोस्
बनेपा । विगत सात वर्षदेखि निरन्तर पुष्प व्यवसाय गर्दै आएका रमिला खड्काले यस वर्ष पनि फूल व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गरेको बताए । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१० जनागालमा विगत सात वर्ष अगाडिदेखि व्यावसायिक रुपमा नै खेती गर्दै आएका खड्काले मौसमी फूल खेती गरे रु ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेको बताए । उत्पादन गरेको फूल बनेपा र काठमाडौंको बजारमा बेच्दै आएकामा अब अलिअलि मात्रै बाँकी छ । उनले भने,... थप पढ्नुहोस्
गीताको तिहारमा गीत बाटो पर्खेर
काठमाडौं । हिन्दुहरुको महान चार्डको अवसर पारेर डि ए आर मुभिज एण्ड फिल्म्स इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले डि एन दाहाल 'धनपति' को प्रस्तुतिमा गीता देवीको तिहार गीत बाटो पर्खेर को भिडियो सार्बजनिक गरेको छ । दशैं गीत 'रुन्छ यो मन' पछि डि.आर.मुभिजको पृथक देउसी भैलो सहितको परदेशी दाजुभाई र गाउँमा रहेकी चेली प्रति समर्पित कथा गीतले बोकेको छ । हाल सम्म चार हजार भन्दा बढी गीतमा स्वर दीइ सकेकी गायिका गीता देवीको ... थप पढ्नुहोस्
चितवन । दीपावलीमा नेपालीका घर आँगन झिलिमिली पार्न रु ६० करोडभन्दा बढीका विद्युतीय सामग्री नेपाल भित्रिएको छ । नियमित प्रयोग हुने बत्तीबाहेक दीपावलीमा मात्र प्रयोग गर्न ल्याइएका विद्युतीय सामग्रीमा त्यति खर्च गरिएको हो । अन्य समयको तुलनामा नियमित बत्तीमा पनि दोब्बर खर्च हुने गर्दछ । नेपाल विद्युत् व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तेजनारायण खरेलका अनुसार विभिन्न खालका झाल्लर, डिस्को बल्ब, बत्ती... थप पढ्नुहोस्
हासने प्रतिष्ठानको ‘आलु पार्टी’
काठमाडौं । काग तिहारका उपलक्ष्यमा स्रष्टाहरुले कविता, मुक्तक, गीत, नृत्यलगायत विधामार्फत हास्यव्यङ्ग्य प्रस्तुत गरेका छन् । हासने प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको ‘आलु पार्टी’ मा जावलाखेलस्थित हासनेघरमा जीतु नेपाल, केरा अर्याल, घनश्याम गौतम, डम्बर घिमिरे, कल्याण राना, पिँडालु पौडेल, बमबहादुर जितालीलगायतले सिर्जना प्रस्तुत गरे । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकुमार पाँडेले चार दशक पहिलेदेखि काग तिहारका दिन ह... थप पढ्नुहोस्